1. iKON အဖွဲ့ဝင် Bobby
iKON အဖွဲ့ဝင် Bobby ဟာ သူ့အကိုရဲ့ သား​လေး Raon ကို တအားချစ်တဲ့ ဦး​လေးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က Raon နဲ့ Bobby တို့ ပထမဆုံးစတင်​တွေ့ဆုံကြတဲ့ ဗီဒီယိုကလည်း အရမ်းကို လူသိများခဲ့ပြီး ​အောက်ပါပုံမှာဆိုရင်လည်း Bobby က သူ့တူ​လေးကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ​ထွေး​ပွေ့ထားတာကို ​တွေ့ရမှာပါ။
သူ့ရဲ့အကြည့်​တွေက​နေတစ်ဆင့်လည်း Bobby ဟာ သူ့ရဲ့တူ​လေးကို ဘယ်​လောက်ထိ ချစ်လဲဆိုတာကို ခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်။ အခု​တော့ Bobby ဟာ ကိုယ်ပိုင်သား​လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တာ​ကြောင့် Raon ​လေးအတွက်လည်း ​ကစား​ဖော်တစ်​ယောက်တိုးလာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
2. EXO အဖွဲ့ဝင် Kai
Kai မှာ​တော့ Rahee နဲ့ Raeon ဆိုတဲ့ ချစ်စရာ တူ​လေးနဲ့တူမ​လေးရှိပါတယ်။ သူဟာ သူ့တူနဲ့ တူမ​လေးကို အရမ်းချစ်ကာ ဂရုစိုက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာ​တွေမှာလည်း ဒီက​လေး​လေး ၂ ​ယောက်ရဲ့ ပုံ​တွေကို မျှ​ဝေ​လေ့ရှိပါတယ်။
“I Live Alone” အစီအစဉ်မှာလည်း တူတူမ​လေး​တွေက Kai ရဲ့ အိမ်ကို လာလည်ခဲ့တာကို ​တွေ့ရပြီး Idol အ​နေနဲ့မဟုတ်ပဲ သာမန်အတိုင်း သူ့ရဲ့ ဦး​လေးပီသတဲ့ပုံစံကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် က​လေး​လေး ၂ ​ယောက်ကလည်း Kai နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးပြီး သူ့ကို အရမ်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
3. TXT အဖွဲ့ဝင် Soobin
Soobin က​တော့ အခုမှ အသက် ၂၁ ပဲရှိ​သေး​ပေမဲ့ ဦး​လေးရာထူးကို ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ တူ​လေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ​တွေကို မျှ​ဝေ​လေ့ရှိ​ပေမဲ့ က​လေးရဲ့ သရုပ်မှန်ကို​တော့ ​ဖော်ထုတ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ သူ့တူ​လေးနဲ့ ဓါတ်ပုံ​တွေတင်တဲ့အခါ က​လေးရဲ့ မျက်နှာကို စတစ်ကာ​နဲ့ အမြဲဖုံးထားပြီး က​လေးရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​ရေးကို ကာကွယ်​ပေးတတ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို စဉ်းစားတတ်ပြီး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ဦး​လေးပါပဲ။
4. BIGBANG အဖွဲ့ဝင် T.O.P
BIGBANG ရဲ့ ပရိသတ်​တွေက​တော့ T.O.P ရဲ့ တူ​လေး Yeonjun ကို သိတာကြာပါပြီ။ Yeonjun ဟာ သူ့အမရဲ့ သား​လေးဖြစ်ပြီး T.O.P ဟာ ချစ်စရာ​ကောင်းတဲ့ သူ့တူ​လေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ​တွေကို မကြာခဏ ပရိသတ်​တွေကို ထုတ်​ဖော်ပြသ​လေ့ရှိပါတယ်။
BIGBANG အဖွဲ့ MADE tour အတွက် မနီလာမြို့မှာ concert ပြုလုပ်တုန်းကလည်း Yeonjun ​လေးက လာ​ရောက်အား​ပေးခဲ့ပြီး BIGBANG အဖွဲ့ရဲ့ lightstick ကြီးကိုလည်း ကိုင်​ဆောင်ထားခဲ့တာကို ​တွေ့ခဲ့ရပါ​သေးတယ်။
5. MONSTA X အဖွဲ့ဝင် Jooheon
MONSTA X အဖွဲ့ဝင် Jooheon က​တော့ သူ့အမရဲ့ သမီး​လေး Olivia ရဲ့ ဦး​လေးဖြစ်ပါတယ်။ Olivia ​လေးတို့မိသားစုဟာ အ​မေရိကန်နိုင်ငံမှာ ​နေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Jooheon ဟာ MONSTA X အဖွဲ့ ဥ​ရောပမှာ လှုပ်ရှားမှု​တွေရှိမှသာ ​တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။
သူတို့ဟာ မကြာခဏ ​တွေ့ခွင့်မရ​ပေမဲ့ ​တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ​သွေးက စကား​ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်​ယောက်နဲ့တစ်​ယောက် အရမ်းကို ချစ်ကြပါတယ်။ Olivia ​လေးက Jooheon ကို “Uncle Honey” လို့​ခေါ်တာ​လေးကလည်း တကယ့်ကို ချစ်စရာ​ကောင်းလှပါတယ်။
6. SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Hoshi
SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Hoshi ဟာလည်း Kai လိုပဲ ချစ်စရာ တူ​လေးတစ်​ယောက် တူမ​လေးတစ်​ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီက​လေး ၂ ​ယောက်ဟာ Hoshi ရဲ့ အမဖြစ်သူက ​​မွေး​ဖွားထားတာဖြစ်ပြီး Hoshi နဲ့ တစ်​ထေရာတည်းတူပါတယ်။
မျက်ရစ်မရှိတာ​လေးကလည်း သူတို့ မိသားစုရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပရိသတ်တစ်​ယောက်က Weverse မှာ Hoshi ရဲ့ပုံကို တင်တဲ့အခါမှာလည်း သူကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ တူတူမ​တွေနဲ့ တူ​ကြောင်း ​ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
7. GOT7 အဖွဲ့ဝင် Mark
Mark မှာ​တော့ သူ့အမရဲ့ သမီး​လေးတွေဖြစ်တဲ့ Kylie, Leila နဲ့ Bailey ဆိုတဲ့ တူမ​လေး ၃ ​ယောက်ရှိပါတယ်။ ယခင်က Mark ဟာ ​တောင်ကိုရီးယားမှာ အဖွဲ့လိုက် လှုပ်ရှားမှု​တွေ လုပ်​နေရတာ​ကြောင့် တူမ​လေး​တွေနဲ့ ​​တွေ့ဖို့အချိန်သိပ်မရပဲ အ​မေရိကန်မှာ concert ​ရှိတဲ့အချိန်၊ အားလပ်ရက်ရချိန်​တွေမှသာ ​တွေ့ရပါတယ်။ အခု​​တော့ Mark ဟာ LA မှာ ပြန်​နေ​နေပြီမို့ သူ့ရဲ့ ချစ်စရာတူမ​လေး​တွေအတွက် အချိန်​ပို​ပေး​နေနိုင်ပါပြီ။
8. AB6IX အဖွဲ့ဝင် Daehwi
Daehwi က​တော့ Chaeyoung ဆိုတဲ့ တူမ​လေးတစ်ဦးရှိပြီး Chaeyoung ​လေးဟာ သူ့ဦး​လေးရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေကို အမြဲအား​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်။ Wanna One အ​နေနဲ့ လှုပ်ရှားမှု​တွေ ပြုလုပ်စဉ်က​ရော အခု AB6IX အ​နေနဲ့​​ရော ပွဲ​တွေပြုလုပ်တဲ့အခါ လာ​ရောက်အား​ပေးတတ်ပါတယ်။ Chaeyoung ​လေး ကိုယ်တိုင်ကလည်း နာမည်ကြီးက​လေး​မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိဘ​တွေက သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်အတွက် Instagram account ​တောင် သီးသန့်ဖွင့်လှစ်​ပေးထားပါတယ်။
Photo : Kpopstarz
Next Idol တစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ Jimin ကို အနေခက် စိတ်ကျဉ်းကြပ်စေတဲ့အရာက ဘာများလဲ »
Previous « ၂ နှစ်အတွင်း Ma Zehan ကို လက်ထပ်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ကတိပေးလိုက်တဲ့ Dylan Kuo
ခွင့်မတောင်းဘဲ ကူးယူသုံးစွဲသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့် တောင်းပန်လိုက်ရပြန်တဲ့ “Luoyang” ဇာတ်လမ်းတွဲ